မီးတောင်ဆိုသည်မှာ မြေကြီးအောက်မှ ချော်ရည် (အလွန်ပူသော ကျောက်ရည်များ) ထွက်လာတတ်သော တောင်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ မီးတောင်အများစု၏ ထိပ်ဆုံးတွင် မီးတောင်ပေါက်ဝ ရှိတတ်သည်။ မီးတောင်အတွင်းမှ ထွက်လာသော ပစ္စည်းများတွင် ချော်ရည်များ၊ ရေနွေးငွေ့များ၊ ဆာလ်ဖာလ်ဓာတ်ပေါင်းများ၊ ပြာများနှင့် ကျောက်တုံးအစအနများ ပါဝင်တတ်သည်။ မီးတောင်များကို ကမ္ဘာပေါ်တွင်သာမက အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ လတစ်စင်းဖြစ်သော အိုလမ်ပတ်စ်လပေါ်တွင်လည်း တွေ့ရသည်။
Wood, C. A., 1979b. Cinder cones on Earth, Moon and Mars. Lunar Planet. Sci. X, 1370–1372.
"Formation and evolution of the chaotic terrains by subsidence and magmatism: Hydraotes Chaos, Mars" (2008). Icarus 194 (2): 487. doi:10.1016/j.icarus.2007.10.023.
"A unique volcanic field in Tharsis, Mars: Pyroclastic cones as evidence for explosive eruptions" (2012). Icarus 218: 88. doi:10.1016/j.icarus.2011.11.030.
"LRO observations of morphology and surface roughness of volcanic cones and lobate lava flows in the Marius Hills" (2013). Journal of Geophysical Research: Planets 118 (4): 615. doi:10.1002/jgre.20060.